Ngabe labo abakhuluma ngokulawula i-intanethi bakhuluma ngani? | Kusuka kuLinux
Ezinsukwini zakamuva, okuthunyelwe okubili okushicilelwe kuleli sayithi, uno namuhla kusuka kuzakwabo elav no enye okwami ​​ngoLwesihlanu olwedlule, ngiphakamise uchungechunge lwezimvo ngodaba lokulawulwa kwe-inthanethi kanye nezintshisekelo zalo. Ngiwafunde ngokucophelela amazwana futhi ngangenelela kokunye ukushintshana, kepha ezimweni eziningi ngishiywe nomqondo wokuthi akwaziwa kahle ukuthi bahlose "ukulawula" ini, ngenhloso yokucacisa lolu daba yilokhu okuthunyelwe.
Njengesampula, ngizofaka kuphela iziphakamiso ezi-3 ezibaluleke kakhulu kimi ngenxa yokubaluleka kwazo kanye nemiphumela engaba khona.
1- Ukuthi inethiwekhi, ama-ISP noma abakhiqizi bokuqukethwe bakhokhela ithrafikhi into ebizwa ngokuthi "imali yokuqeda" futhi lokho akuyona intela evuna izinkampani zezokuxhumana ezingabanikazi bengqalasizinda abazisebenzisela ama-ISP YA bayakhokha.
2- Ukuthi ohulumeni banqume ukuthi idluliswa kanjani futhi kuphi i-Intanethi, okuze kube manje kwenziwa ngokuzenzakalela, kufuna indlela emfushane (noma esheshayo) ngenethiwekhi esatshalaliswayo yamanje.
3- Ukuthi imininingwane ethile ingabhalwa ngokuthi "ayiziphethe kahle", "iyacasula", "iphikisana nezintshisekelo ze ...", "iyingozi ekuphepheni kwe ...", kanye ne-etcetera ende esho ngokuzenzakalela ukuthi kufanele ikhishwe kunethiwekhi .
Ngubani ongemuva nokuthi ziyini izintshisekelo zabo
1- Kukhuthazwe izinkampani zezokuxhumana, okubonile ukuthi inzuzo yabo incishisiwe ngenxa yokwehla kwezingcingo zendabuko ezivela ekusetshenzisweni kwamathuluzi afana ne-Skype, njll. okuyinto "eguqula" izingcingo zibe ithrafikhi yedatha yepakethe. Ekuboneni kokuqala kungahle kubonakale sengathi ukuvunywa kwayo kungalimaza kuphela abenzi bokuqukethwe abakhulu njengamanyuvesi, njll., Noma abahlinzeki bezinsizakalo ezinkulu, abanjengoGoogle, njll., Kodwa khumbula, sikuwebhu 2.0 lapho wonke umuntu Singabavelisi bokuqukethwe abangahle futhi, noma kunjalo, imali izogcina iphuma emaphaketheni ethu, ngandlela thile, ngenye indlela, ngaphezu kokulahleka kokufinyelela kokuqukethwe okuningi.
2- Ngokombono wezobuchwepheshe, kusho ukuthi inethiwekhi izoyeka ukuzilawula ngaphansi kwezinqubo zobuchwepheshe bokusebenza kahle nokwethenjelwa ukuphathwa ngezinqubo zokuhweba noma zezepolitiki; ithrafikhi ibizohanjiswa ngaleyo enikeza intengo engcono kakhulu noma leyo yozakwethu wezepolitiki kahulumeni okukhulunywa ngaye. Ngaphezu kokubandakanya inqubo yezingxoxo phakathi kohulumeni nabanikazi bengqalasizinda engaholela enkohlakalweni enkulu nasezithembeni eziyimfihlo, kuzokwenza ukuthi kungabi lula ukugwema "isiminyaminya" sezimoto, ngoba amandla amaphakethe emininingwane azolahleka. sesha ngokuzenzakalela umzila ofanele. Nakulokhu futhi, abalimele kuzoba yibo bonke abasebenzisi, abazogwetshwa ukuhlupheka ukulinda isikhathi eside kunaleso senkathi yamamodemu ashintshiwe.
3- Ngabe kunesidingo ngempela ukuchaza lokhu? Kulungile; kumane nje kusungulwa ukucwaninga njengesinye sezisekelo ze-intanethi. Kulezi zinsuku kukhona ukuvinjelwa, kepha empeleni kusetshenziswa ohulumeni, bephoqa ama-ISP ezizwe zabo ngokusebenzisa izihlungi kanye / noma amabhlokhi, ngaphandle kwalokho bazokhipha amalayisense abo okusebenza, uma ama-ISP engekho ezandleni zabo. ohulumeni. Ngaphezu kwalokho, YONKE imibandela echazwe ngokuthi "amalebula" iqondiswe ngokuphelele, ngakho-ke kunesizathu esengeziwe sokuyenqaba. Kungaba yini umonakalo kubasebenzisi, ngincamela ukungasho, ngithemba ukuthi njengabathandi benkululeko (hhayi leyo yekhodi kuphela), siyazi ukuthi singayazisa kanjani.
Ukukubeka emshweni owodwa, ngoba unikezwe iziphakamiso nokuthi zisho ukuthini, kuzo zonke izimo, "ikhambi" libi kakhulu kune "sifo."
Ukuqala ukuxoxa ngalesi sikhathi ukuthi inethiwekhi imahhala namuhla noma cha akuyona into ebaluleke kakhulu; Kufana nokuphikisana ngombala wekati kanti lokho sonke esikuthandayo ukuthi izingela amagundane.
Futhi kuthiwani "ngabalingani abangakhululekile"?
Leli yiphuzu elithakazelisayo, iningi lokugxekwa kwabahlaziyi lisuselwa ekungabethembi labo abaphikisana nomthethonqubo, hhayi ngenxa yalokho abakuphakamisayo noma izizathu zokuthi kungani bephikisana nakho, kodwa ngoba bavela enkampanini ethile noma uhulumeni. Kimi, isimo sengqondo esinjalo sinelukuluku futhi ngikuthatha njengomphumela wesenzo esiyinhloko nesinomzwelo kunokucabanga okubalwe ngokususelwa kulwazi, kepha hheyi, bangaphakathi kwamalungelo abo, noma ngabe kungahambisani nabo. Ngikhetha ukubonisana kunokuba ngibe "nezinkolelo" Uma kusasa i-RIAA ne-SGAE beqala umkhankaso wokulwa nomthetho we-inthanethi ngokususelwa ekwenqatshweni kwalezi ziphakamiso ezingenhla, bangathembela kuvoti lami, ngoba bazobe besekela izimfuno zami, hhayi ezabo.
Kule mpi, bonke ababambisene bamukelekile, kusuka kusosayensi "ubaba" we-Intanethi njengoVinton Cerf, i-Internet enkulu njenge-Google, kumsebenzisi we-Intanethi wakamuva futhi wakamuva kakhulu kusuka kunoma yikuphi emhlabeni, kusukela ukuvikelwa kwe-Intanethi kuphumule. emahlombe abo bonke abantu.
Ngiyethemba bekungekude kakhulu futhi ngethemba ukuthi umbhali odumile UHaruki Murakami Ngiyaxolisa ngokubeka isihloko se- una yamanoveli akhe amahle kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Ngabe labo abakhuluma ngokulawula i-intanethi bakhuluma ngani?
Kuchazwe kangcono ukuthi akunakwenzeka. Kuyamangalisa ukuthi iqembu elincane labantu (labo ababusa ngokwemvelo) lingenza kanjani izinqumo ngaphezulu kwezigidi, phezu kwabantu bonke kanye namazwe. Futhi okubi kakhulu, bakholwa ngokulungile. ¬¬
Ngiyabonga ngokuphawula kwakho, okungivumela ukuthi ngibeke iphuzu engingalifakanga kokuthunyelwe.
Engqungqutheleni ye-WICT ngaphansi kwesandla se-ITU njengengalo ye-UN, ngaphezu kohulumeni abangamalungu, "izinhlangano ezizimele" ezingama-700 zibamba iqhaza, nazo ezingamalungu e-ITU, kodwa AKEKHO kuzo ezimele abasebenzisi be-intanethi. Ukuthola ubulungu kule nhlangano "yentando yeningi" kubiza u- $ 2,100 kuya ku- $ 35,000 USD unyaka nonyaka, nokwandisa ukuthi la "malungu" awanalo ilungelo lokuvota, imvamisa ayizinhlangano ezinentshisekelo emkhakheni wezokuxhumana ababamba iqhaza kuwo ukunxenxa, ngakho-ke uma iGoogle ibinentshisekelo yokuthola amandla amaningi kunhlangano efana nale, angicabangi ukuthi ukukhokha imali yobulungu kungaba ubunzima kubo, akunjalo?
Ngikutholile njenge-athikili enhle kakhulu hhayi kuphela ngoba ngicabanga ngayo cishe icishe ifane neyakho.
Okungikhipha ngaphandle kwesithombe umbala wombala wekati, kepha impela ukuthambekela kuka-feline okungenza ngibone "ukuthi ukuphela kuthethelela izindlela" lapho kungekho khona.
Ngifisa nokwazi umbono wakho ngalesixazululo Ohulumeni bezingcindezi, izinhlangano ...? Njengekati elihlanyayo, bengicabanga isikhathi eside ukuthi kufanele sizakhele i-Intanethi ukuze sizikhulule ngokuphelele. Kancane kancane, kepha kuyaqala manje. Ekuqaleni bekungaba phakathi kwama-node aseduze, njengoba amanye amaqembu asebenzayo enza, kepha akunakwenzeka yini ukuthi inhlangano / ukubambisana okukhulu okwanele kungafaki i-satellite orbit noma yini engiyaziyo?
Uma sizakhela eyethu i-Intanethi, ucabanga ukuthi bazosishiya sodwa? Kuphuma imithetho ethinta amanethiwekhi endawo, asinakuphunyula.
Ukuthi into enzima kakhulu ukuguqula ukucabanga kwabantu, okubi kakhulu kunalokho kosopolitiki nohulumeni, abangawuqondi kahle umthelela wenethiwekhi emphakathini, hhayi ezimpilweni zabantu kuphela kepha nasekukhuleni komnotho; kepha cha, bakhona «fucking», kunjalo «egameni lethu nokusisiza» ...
Manje usungikhathazile. Awufundanga yini ngekati elihlanyisayo?
Kuzodingeka kuphela ukuthi basitshele ukuthi kufanele sibe kanjani ekhaya.
Uma uthi imithetho kumanethiwekhi asendaweni usho ukuthi "amanethiwekhi asendaweni" noma "imithetho yasendaweni kumanethiwekhi angewona anjalo"?
Ingabe leyo mithetho iseSpain? Woza, ungitshele cha ukuze ngiqhubeke nokulala ngokuthula.
HAHAHAHA ... Akukho ongakubona, ukuthi "ukuphela kuthethelela izindlela" kuhlale kubonakala kimi kubi kakhulu, ngakho-ke ngiyakuqinisekisa ukuthi akuyona inhloso yesibonelo sekati; okusobala ukuthi useduze kwakho. 😉
Ngokuqondene nekhambi, ngicabanga ukuthi ungibuza okuningi, kepha okungenani ngizozama. Ukugcina ingcindezi kohulumeni nasezinhlanganweni kuhlale kuwusizo, noma ngabe ngokusobala abasinaki, ngoba empeleni BENZA, ezimweni ezimbi kakhulu, bezama ukuthulisa imibhikisho yalabo abathi, noma ngabe ikuphi, futhi sinikezwe ulwazi lokuthi inethiwekhi yavela futhi yathuthuka kanjani nokuthi isho ukuthini esintwini sisonke, uma sonke kufanele sivikele okuthile, kungukuthi ihlala ikhululekile ekungeneleni kohulumeni nezinhlangano, okungadingeki kunoma ngubani (noma ngabe unezinhloso ezinhle kakhulu) zama ukuwulawula noma ukuwulawula, lezo zixakaxaka ezihleliwe yisimo esihle kunazo zonke ezingasizuza futhi ukuphela kwaso esiqinisekisa ukuthuthuka kwaso unomphela.
Ngokuphathelene "nokwakha" enye inethiwekhi, angiyiboni ingenzeka, futhi angicabangi ukuthi ingaxazululwa ngesathelayithi noma into efana naleyo, inani lengqalasizinda yamanje lenethiwekhi alinakulinganiswa (ngikhuluma ngezimali inani lezinsizakusebenza nezinsizakusebenza), futhi akuyona imali yosuku olulodwa, ngaphandle kwalokho, kungafana nokuzama ukusungula isondo; lokho sekuvele kukhona futhi kade kuphenduka isikhathi eside.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho nangokuma lapha, ngizokugcina engqondweni ukuze ungenzi okunye ukungajabuli ngamakati ...
Ngiyabonga kakhulu ngokucaciswa, njengoba njalo izindatshana nemibono yenu kunolwazi kakhulu futhi kunenhloso.
Ngivumelana nawe, ezikhathini eziningi abantu bathwalwa yizinkolelo kanye nokubandlulula ukuveza umbono esikhundleni sokuhlaziya imininingwane bese beyibuyekeza ukuze banikeze umbono onolwazi, kulokhu mayelana neminye imikhuba ye-Google ebandakanya ubumfihlo nokuphathwa kolwazi, ngiyaqonda ukuthi kukhona abanqikayo kodwa okungasolwa ukuthi ifuna inzuzo yezomnotho, iyinkampani ngendlela efanayo nanoma iyiphi lapho senza khona umsebenzi wethu. Kepha kuyadingeka futhi ukubona ukuthi izimpikiswano zabaphikisi zilungile futhi umphumela ongaba khona walokhu okwenzekayo mubi kakhulu kunesimo samanje.
Bheka, lapho ngizwa "ngamayelenqe" abandakanya i-Google kanye nokuphathwa kwayo kwemininingwane yomsebenzisi, into yokuqala efika engqondweni yizo zonke izinsiza nezinhlelo zokusebenza ezithuthukiswe yiGoogle, ngokunembile kusukela ekuhlaziyweni kolwazi oluqoqwe kubasebenzisi bayo, ngenkathi kuqhubeka ngakolunye uhlangothi, angazi ngecala elilodwa lapho lisebenzise khona leyo mininingwane kubasebenzisi; Uma kunecala langempela nelibhaliwe, sicela ucele othile alikhombe. Njengoba ngicabanga ukuthi ngike ngasho phambilini, abantu kanye nezikhungo (izinkampani, izinhlangano noma ohulumeni) kufanele balinganiswe ngomphumela wezenzo zabo, hhayi ngalokho abakushoyo noma okushiwo ngabo futhi, ngiyaphinda kuze kube manje, umphumela wezenzo zeGoogle muhle. Ngokuqondene nokwenza ubudemoni ekufuneni inzuzo yezomnotho, kuwumkhuba osunesikhathi eside emazweni ethu futhi kudinga ukuhlaziywa kwe-anthropological noma kwengqondo engikhetha ukungakuzama.
Ngiyabonga kakhulu ngombono wakho nangokudlula lapha.
Kuliqiniso, kepha kuhlale kunethuba lokuthi uhulumeni azophoqa i-Google ukuthi inikeze imininingwane mayelana nabasebenzisi bayo noma ukuthi inqubomgomo ye-Google iyashintsha inkambo futhi banquma ukusebenzisa imininingwane abanayo ngezinjongo zokuziphatha ezingezinhle. Sebevele baphoqeleka ukuba bahlole ingxenye yemisebenzi yabo ngenxa yengcindezi evela kohulumeni namaqembu ezamandla. Ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi akuwona umqondo omuhle ukubeka yonke imininingwane yakho ezandleni zabo bese usebenzisa izinsizakalo zabo kuphela. Bengihlale ngisho ukuthi akukuhle ukugembula yonke into ekhadini elilodwa.
Angicabangi ukuthi i-google ingusathane. Ngaphakathi kokubi bangcono kakhulu kukhona, kepha abazona nezingelosi futhi kungcono ukuthatha izinyathelo zokuqapha uma kwenzeka. Futhi lokhu angikusho nge-google kuphela. Umgomo ofanayo kufanele ulandelwe nazo zonke izinkampani.
Yebo, okwamanje, ngicabanga ukuthi iphendule kahle kwingcindezi, iyikhombisile ngenkathi isuka eChina, okubuhlungu ukungakwazi ukusho okufanayo ngamanye "ama-greats" angakhulunywa futhi asebenzisane nohulumeni abanjalo. Ithuba lokuthi lishintshe (kokubi kakhulu) lihlala likhona, kepha futhi kukithi ukukuvimbela ukuthi kungenzeki. Ngivumelana nawe ukuthi asikwazi ukubheja yonke into ekhadini elilodwa, empeleni, ngisebenzisa izinsizakalo ezahlukahlukene noma nini lapho ngikwazi khona.
Ngokuphathelene nokuhlukaniswa "kwezingelosi" noma "amadimoni", kubukeka kufana nesihloko esithengisa kakhulu, ngincamela ukucabanga ukuthi, njengakho konke okusemhlabeni, kunama-nuances.
Ngicabanga ukuthi awungizwisanga kahle, bengisho ukuthi ngiyaqonda ukuthi abantu banokubandlulula okuthile futhi bayanqikaza uma kukhulunywa ngeGoogle kepha angikaze ngibhekise kuzungu noma okufanayo, ukuthi iGoogle inolwazi oluningi ngalabo abasebenzisa izinsizakalo? Yebo, ubani oyisebenzisela ukuzuza? Mhlawumbe, ukuthi siyazamukela lezi zimo lapho usebenzisa izinsizakalo zakho? Yebo kunjalo, kepha yiyona ndlela osho ngayo ukuthi yiyo esize ukukhiqiza intuthuko kulolu hlobo lwenkonzo.Wozani, angazi ukuthi bekungenzekani ngeposi ngaphandle kweGoogle, ngisawakhumbula lawo mabhokisi eposi ama-2 mb!
Cha, hlisa umoya, ngikuzwisisile ukuphawula kwakho. Ngesikhathi ngikhuluma ngesihloko esithi "uzungu" bengingabhekisi kuwe, kodwa "kubantu bathathwa yizinkolelo nobandlululo" obalulayo. Ngivumelana nawe kulokho okuphakamisayo, empeleni sonke samukela imibandela yokusetshenziswa kwamasevisi we-Google nabanye abahlinzeki, uma kungenjalo, ASikwazi ukuthola izinsizakalo, ngakho-ke siyazamukela ngandlela thile. Ngokwami, lapho ngingavumelani nemibandela yokusetshenziswa kwensizakalo, angiyisebenzisi noma ngiyenza okungenani, kuphela ukufeza izinhloso zami, ngokwesibonelo, ngenza i-akhawunti ye-Facebook ukuvota kwi-Bitácora Imiklomelo, kepha angiyisebenziseli enye into noma ngibeka imininingwane yomuntu kuyo. Angisho ukuthi yisixazululo esifanelekile kepha okungenani yiso engisisebenzisa ngempumelelo ethile.
Ngiyabonga kakhulu ngakho konke ukuphawula kwakho okukhanyisayo ngempela.
Iqembu lezingxoxo zePal Palate Party
Kulungile, ngibhalisele lowo mdlalo engivele ngilungisa isichibi nopholi ohambisana nawo engikhulume ngawo ... 😉
Yiyo evela e-Uruguay. Bona ukuthi ngabe kukhona yini iqembu labaphangi ezweni lakini, nokuthi awukholwa yini.
Kulungile, kepha lapha lapho ngihlala khona into enjengale ayinakwenzeka, noma i- «pirate» noma i- «buccaneer» ... 🙁
Ngiyabonga, kufanele ngoba izihlakaniphi ziyaqondana ... HAHAHAHAHA
sizobona ukuthi konke lokhu kugcina kanjani
Ngicabanga, ngeshwa, hhayi njengoba sifisa. Uma ufuna imininingwane engaphezulu, ngincoma udaba olushicilelwe namuhla ku-Cnet olunikeza incazelo eningiliziwe nezimpendulo zemibuzo engavela ngalolu daba, nansi isixhumanisi:
Abezombusazwe abakholwa noma basebenzise inkululeko. Banesithakazelo kumandla kuphela, aqondwa ngokuthi "ukulawula okuphelele."
Siyakuhalalisela ngemibhalo yakho. Kubukeka kungakholeki ukuthi kusekhona abantu, phakathi kwabathandi be-intanethi, abangacaciswanga ngakho konke lokhu. Ake sibheke ukuthi ngabe sivuka futhi sikwazile yini ukugwema ukuthathwa kule nkululeko encane esisele nayo.
Ngikholwa ukuthi miningi imizamo eyenziwe "yokuvangela" nge-software yamahhala, kodwa bambalwa kakhulu "abavangeli" mayelana neNkululeko, ngosonhlamvukazi, njengesisekelo sokuqala nesibalulekile empilweni.
Yebo, sikhuluma ngento engenagama ngisho nakithi baseCuba ... i-Intanethi ... abaningi lapho bezwa leli gama batatazela ... izixwayiso ezithi nsuku zonke zibe yingxabano yokusiphika lokhu kuxhumana, okuthe nakuba eminyakeni engama-50 edlule exist Manje kubalulekile ekuthuthukiseni abantu emphakathini wethu, nokuthi bangitsheli ngaphezu kokuthi umkhulu wami waphila ngaphandle kwesidingo, noma ngabe mhlawumbe siyenqaba ukwelashwa nge-penicillin lapho sithola ukutheleleka ... Ngamafuphi, ngisho nje ukuthi i-intanethi akuyona enye into, ngoba ngonyaka odlule uma ngikhumbula kahle, kuhlu lwamalungelo abantu….
Ngesinye isikhathi ngeke babe nokukhetha, kunengcindezi enkulu evela kuyo yonke indawo, futhi bazophoqeleka, uma ungakukholwa, bheka ukuthi kwenzekeni ngendaba yezokuvakasha, kepha lapho bekwenza, bazosebenzisa eziningi imikhawulo engaphezulu kunaleyo eshiwo Ngoba banabeluleki abahle kakhulu; Khumbula ukuthi yonke ingqalasizinda yamanje yezokuxhumana ifakwa namaShayina, namathimba abo kanye nezeluleko zabo. Kunoma ikuphi, kuzoba ngathi ukuthi sigweme imikhawulo, njengoba senza manje, lapho singenayo i-intanethi. 😉
Lapha eCuba ukukhuluma nge-Intanethi kumane kuyisisekelo.
Nge-terminal: Phatha i-Twitter noma i-Identica nge-Twidge